Halyeeyga Benfica Nuno Gomes oo Raba in Devid Liuz uu Kooxda kusoo laabto.
Home Wararka Ciyaaraha Maanta Halyeeyga Benfica Nuno Gomes oo Raba in Devid Liuz uu Kooxda kusoo...
Daafaca kooxda Gunners ayaa qandaraaskiisa ka maqnaa xagaaga waxaana uu horey u sheegay rabitaankiisa ah inuu maalin uun ku laabto kooxdiisii hore Halyeeyga Benfica Nuno Gomes wuxuu doonayaa inuu arko David Luiz oo ku soo laabanaya kooxda ka hor inta uusan howlgab noqon.
Luiz wuxuu afar sano la qaatay Benfica intii u dhaxeysay 2007 iyo 2011 wuxuuna horey u soo jeediyay inuu jeclaan lahaa inuu mar labaad u dhawaaqo Lisbon ka hor inta uusan waqtiga u yeerin maalmihiisa ciyaarta.
Gomes – oo saaxiib la ahaa daafaca dhexe ee Estadio da Luz – ayaa sheegay inuu jeclaan lahaa inuu ku soo laabto xidiga xulka Brazil kooxda benfica.
Wareysi gaar ah oo la yeelatay Goal ka hor kulanka Arsenal ee Europa League ee Benfica, Gomes wuxuu ka hadlay suurtagalnimada in Luiz uu ku laabto kooxda reer Portugal Wuxuu yiri: Aan aragno waxa dhaca.
Waxaan xasuustaa markii uu ka tagay Benfica inuu si fiican ula qabsaday Portugal marka loo eego mustaqbalkiisa garoonka iyo noloshiisa bulsheed ee garoonka Wuxuu la mid ahaa Boortaqiis horeyba marka loo eego qaabkiisa nololeed iyo dhaqankiisa.
Wax yar ayuu ku dhibtooday inuu baxo maxaa yeelay si fiican ayuu u shaqeynayay si wanaagsanna halkan ayuu ugu degay Laakiin dalabkii uu helay ma diidi karo.
Laakiin wuxuu had iyo jeer oran jiray maalin uun inuu doonayo inuu soo laabto Ma aqaan haddii ay suurtagal noqon karto iyo in kale, laakiin waxaan jeclaan lahaa inay taasi dhacdo.
Previous articleMacalinka real madrid Zinedine Zidane oo ka hadlay guushii ay gaartay kooxdiisa.
Next articleDouglas Costa oo Jecel inuu ku laabto horyaalka Talyaaniga.